प्रकाश सपुतकी पत्नि छिन् सुन्दरी हिरोइन भन्दा पनि राम्री – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/प्रकाश सपुतकी पत्नि छिन् सुन्दरी हिरोइन भन्दा पनि राम्री
प्रकाश सपुतकी पत्नि छिन् सुन्दरी हिरोइन भन्दा पनि राम्री
प्रकाश सपुतकी पत्नि छिन् सुन्दरी हिरोइन भन्दा पनि राम्री, बोलमाया, लगबन्दी, फाटेको चुराले लगायतका चर्चित गीतहरुबाट मात्रै करोडौँ रकम कमाएका प्रकाश चढ्छन् यस्ते महंगो कार, बाइकका सौखिन प्रकाशको छ काठमाडौँमा नै यस्तो भब्य आलिसान महल, करोडौँका मालिक प्रकाशले आफ्नी पत्निलाई गर्छन् विबाह अघिकी प्रेमीकालाई जस्तो औधी माया, भन्छन् बाहिरका तरुनीसँग मन जाँदैन यही बढीमा छ दिल र जवानी, हेर्नुहोस्र प्रकाश र उनकी पत्निसँग एकसाथ उनकै भब्य घरमा गएर लिइएको यो स्पेशल भिडियो रिर्पोट
काठमाडौँ । चर्चित गायिका एलिना चौहानको नयाँ गित ‘भाग्यमा खोट छ’ सार्वजनिक भएको छ । जसमा सुन्दरी गायिका एलिनालाई ब्ल. ड क्या .न्सर जस्तो रोग लागेको दृश्य देखाइएको छ । गीतको शब्द र म्युजिकले रोशन सिंहको रहेको छ। भने म्युजिक एरेन्ज र मिक्सिङ्ग जीवन बडुले गरेका छन् ।
गीतको म्युजिक भिडियोमा एलिना चौहान र रोशन सिंह फिचर्ड रहेका छन् ।
म्युजिक भिडियोको छायांकन प्रकाश खडकाले र सम्पादन मिलन बिश्वकर्माले गरेका छन् । भने म्युजिक भिडियोको निर्देशन बिक्रम चौहानले गरेका छन् । म्युजिक भिडियो गायिका एलिना चौहानको अफिसियल युटुब च्यानलबाट रिलिज गरिएको छ। भिडियोमा एलिनाको साँचो मायाले सार्थकता पाउन नसकेको दृश्यलाई देखाइएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो
ह्याण्डसम हिरो अनमोल केसीसँग प्रेममा छिन् पारसकी नायिका आज्ञा ! : ह्याण्डसम हिरो अनमोल केसी जुन जुन नायिकासँग काम गर्छन् उनैसँग लभ अफेयर्सको चर्चा चलिहाल्छ । ‘जेरी’ नायिका आना शर्मा, सृष्टि श्रेष्ठ, साम्राज्ञी, अदिती, उपासना लगायतका सुन्दरीहरुसँग काम गर्ने क्रममा अनमोलको नाम उनीहरुसँग प्रेम रोमान्समा नै डुबेका छन् भन्ने तरिकाले चर्चा भइरह्यो । यसैबिच हाल ‘पारस’ नामक चलचित्रमा काम गरिरहेकी अर्की सुन्दरी नायिका आज्ञासँग यतिबेला अनमोलको नाम जोडीएको छ ।
ह्याण्डसम अनमोलको जन्मदिनका दिनमा सुन्दरी आज्ञाले ‘विशेष मान्छेको विशेष दिन’ भन्दै अनमोलसँगको तस्वीर पोष्ट गर्दै शुभकामना दिएकी छिन् । आज्ञाले अनमोललाई मायालु शब्द लेख्दै ‘तिम्रो ठूलो दिन जती विशेष छ, त्यती नै विशेष तिमी मेरो लागि छौं, अकु भनेर लेखेपछि उनीहरु प्रेममा रहेका छन्की भन्ने बुझिान्छ ।
अनमोल र आज्ञा एकसाथ दार्जिलिङ समेत पुगेको खबर केही समय अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । यसले पनि उनीहरुविच प्रेममा रहेको चर्चालाई मलजल पुगेको छ । यसअघिका नायिकाहरुसँग पनि अनमोलको नाम जोडिँदै आएको थियो ।
डोजर चलाउने सुन्दरी देखीइन यस्तो अ’वतारमा… (हेर्नुस् भिडियो)